संक्रमित नर्स नै विरामीको उपचारमा – sunpani.com
संक्रमित नर्स नै विरामीको उपचारमा
सुनपानी । १५ बैशाख २०७८, बुधबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जको कोरोना वार्डकी स्टाफ नर्स कमला नेपाली आफै कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ ।
संक्रमणका बाबजुद स्टाफ नर्स कमला अरु संक्रमितको सेवामा खटिरहनु भएको छ । कोरोना संक्रमितलाई पोसिलो खानेकुरा खादै आइसोलेसनमा बस्न चिकित्सकहरु नै सल्लाह दिन्छन् । तर, स्टाफ नर्स कमलालाई त्यस्तो फुर्सद छैन ।
स्टाफ नर्स कमला भन्नुहुन्छ, ‘छाती दुख्छ । केहीबेर बेडमा आराम गर्छु । फेरि विरामीको उपचारमा खटिन्छु ।’
भेरी अस्पतालमा जनशक्तिको कमी हुँदा संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि उपचारमा खटिनु परेको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रकाश थापाले चिकित्सक र नर्ससहित ६० जना संक्रमित भएको बताउनुभयो । उहाँले दश जना नर्स आफै संक्रमित भएर पनि अरु विरामीको उपचारमा खटिएको जानकारी दिनुभयो । मेसु डा. थापाले भन्नुभयो, ‘विकल्प नै नभएपछि संक्रमित नर्स नै विरामीको उपचारमा खटाउनु परेको छ ।’
भेरीमा कोरोना विरामीका लागि एक सय ४२ बेड छुट्याइएको थियो । त्यसलाई बढाइएको छ । अहिले त्यहाँ २ सय १२ जना विरामी छन् । बेड बढ्दै जाने, स्वास्थ्यकर्मी नबढ्ने र भएका पनि संक्रमित भएपछि समस्या भएको छ । ५ जना स्टाफ नर्सले सय जनासम्म विरामी हेर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
दुई दिनअघि भेरीले जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको छ । अस्पतालले ६० जना कर्मचारी आव्हान गरेको छ । अस्पतालले एनेस्थेसियोलोजिष्ट तीन जना, मेडिकल अधिकृत १० जना, नर्सिङ अधिकृत दुई जना, ल्याब टेक्निसियन ५ जना र स्टाफ नर्स ४० जना करारमा माग गरेको छ ।
अस्पताल विकास समितिका सदस्य धनीराम वलीले तीन दिनभित्रै कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी विज्ञापन आव्हान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलीसम्ममा कति निवेदन आए हेर्छौ र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’